Gudoomiyihii Hore Ee Baarlamaanka Somaliya Jawaari Oo Sheegay Inuu Isku Sharaxayo Gudoomiyaha Baarlamaanka Cusub.
Friday June, 22 2018 - 06:50:02
Wednesday January 04, 2017 - 12:40:19 in by salman abdi
Muqisho(AFKA);Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ah Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Somaliya ahna Sii haya Xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka, ayaa maanta ku dhawaaqay inuu yahay Musharax u taagan qabashada Baarlamaanka Somaliya mar kale.
Jawaari oo Saxafadda kula hadlay Madaxtooyada Somaliya ayaa sheegay dalab fara badan oo kaga yimid Bulshada Somaliyed kadib inuu aqbalay inuu isku soo sharaxo xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka Somaliya.
Waxa uu sheegay hadii loo doorto xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka Somaliya inuu keenaayo isbedel hogaamineed oo ku aadan shaqada Baarlamaanka Somaliya.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawari ayaa Afartii sano ee la soo dhaafay hogaaminaayay Baarlamaanka Somaliya, waana shaqsi siyaasad qaboow sida ay tilmaameen marka ay ka faaloonayaan dadka odorosa Siyaasada.
wuxuu shaaciyay maalinta beri ah inuu geynaayo foomkiisa isdiiwaangelinta Xarunta Guddiga Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa.